Kirin 990: Nhazi kachasị ike na 5G bụ onye ọrụ | Gam akporosis
Kirin 990: Huawei kacha ike processor bụ ukara
Edere Ferreno | | Huawei, IFA
E gosipụtara Kirin 990 na IFA 2019. Izu ole na ole gara aga, Huawei kwadoro nke ahụ ha ga-eweputa ihe nhazi ohuru ha na ihe omume na Berlin. Nke a bụ igwe nrụpụta ọhụrụ ya, akpọrọ ka ọ dịrị na ekwentị ọhụrụ nke ndị nrụpụta China nke ga-ewepụta ihe na-erughị izu abụọ. Enweela ọtụtụ asịrị banyere ihe nhazi a, mana ọ bụrịrị gọọmentị.
Dị akara nke China ewebatalarị Kirin 990, yabụ na anyị maara nkọwa niile. Anyị na-ezute tupu onye nhazi kachasị ike nke ika ahụ Ruo ugbu a. Na mgbakwunye, dị ka a nụrụ asịrị n'izu a, ọ bụ ihe nhazi mbụ maka ika ahụ nwere 5G na-agbanwe agbanwe.
1 5G na ọgụgụ isi dị ka ike
2 Njirimara Kirin 990
3 Kedu mgbe a na-ahapụ Kirin 990?
5G na ọgụgụ isi dị ka ike
Ihe nhazi a na-etu ọnụ karịa ike niile, na mgbakwunye na ọnụnọ nke ọgụgụ isi. Otu n'ime data nke Huawei kesara na ngosipụta nke Kirin 990 bụ nke ahụ processor nwere 10.300 ijeri transistors n'ime. Nke a na - enye aka na oke ọsọ n'otu, dịka ụlọ ọrụ ahụ si kwuo, nwere ike iru 2,3Gbps nke ọsọ ọsọ na ihe ruru 1,25Gbps nke bulite ọsọ.
Amamịghe echiche bụ ihe ọzọ dị mkpa nke mgbawa. Ka ọ dị na mbụ, NPU na-eme anya na otu. Na mgbakwunye, enweela mmụba doro anya, ụlọ ọrụ ahụ ekwuola na na ngwa ọgụgụ ọgụgụ isi onye nhazi ya ji okpukpu atọ dị ka ndị isi ya na ahịa. Huawei ewebatala NPU aha ya bụ Da Vinci.
NPU a anyị na-ahụ na Kirin 990 Ọ na-apụta maka ịnwe nnukwu nhazi maka ọrụ ọrụ ọgụgụ isi kachasị achọ. Na mgbakwunye na nhazi ahụ, ọ nwere ihe nhazi nke ọgụgụ isi nke abụọ. Ihe nhazi nke abuo a adighi ike, mana o puru iche karie oru ya ma a bia oru. Akara ahụ kwuru na emepụtara ya nke ọma ka ọ rụọ ọrụ ma a bịa n'ịrụ ọrụ kwa ụbọchị.
Ọzọ nke nnukwu akwụkwọ akụkọ, nke a tụlerela ụbọchị ole na ole, bụ na Kirin 990 bịarutere na 5G na-agbakọ ọnụ. Ọ bụ mgbanwe site na ekwentị ndị dị ugbu a, nke na-eji mọdem 5G mpụga. Na nke a, modem ahụ etinyebere n'ime nhazi ahụ n'onwe ya. Nke a na-enye ohere processor dakọtara na netwọk 5G NSA na netwọkụ 5G SA, na mgbakwunye na 4G, n'ezie. N'ụzọ dị otú a, ndị ọrụ ga-enwe ohere n'oge niile na netwọk ndị dị.
Ihe modem 5G ejiri na nhazi ahụ pụtara maka arụmọrụ ya. Ebe ọ bụ na ọ dị ngwa, ọsọ karịa nke anyị hụrụ onwe anyị na ya Exynos 980 kpughere izu a site na Samsung. Na mgbakwunye na ịnwelata ike oriri, nke bụ akụkụ dị mkpa, n'ihi na 5G na-apụta maka iwepụtakwu ikike na ekwentị, yabụ ọ dị mkpa na akara a na-eme ihe na mpaghara a. Ọ bụ ezie na nkwado a ma ọ bụ mwekota a na 5G bụ maka nsụgharị nke processor. Ebe ọ bụ na anyị na-ahụ Kirin 990 5G na nsụgharị nke bụ naanị 4G. A na-ekwenye na a ga-enwe ndị nhazi abụọ dị elu.
Njirimara Kirin 990
Huawei ka na-akọrọ ndị ọrụaka e ji mara nke a processor na zuru na mmemme gị. Ya mere, anyị maara ihe anyị nwere ike ịtụ anya na ya gbasara arụmọrụ. Offọdụ n'ime ha abanyeworị n'ime izu ole na ole, yabụ ihe omume a ejirila kwado ụfọdụ asịrị banyere nhazi ahụ. Nkọwapụta ya dị ka ndị a:
Usoro nhazi: 7 nm + FinFet EUV
CPU: 2 Cortex A76 cores na 2,86 GHz + 2 Cortex A76 cores na 2,36 Ghz + 4 Cortex A55 cores na 1,95 Ghz.
GPU: Mali G76 16-isi
NPU na ụlọ ọrụ Da Vinci ọhụrụ
Njikọ: 5G modem wuru n'ime ihe nhazi
Ibudata na bulite ọsọ: Ruo ọsọ ọsọ 2,3 Gbps na ọsọ ọsọ ọsọ 1,25 Gbps
Nkwado SIM abụọ na 4G na VoLTE.
Foto: ohuru ISP iji melite foto na vidiyo
Kedu mgbe a na-ahapụ Kirin 990?
Anyị agaghị echere ogologo oge iji hụ ekwentị mbụ na-eji Kirin 990 n'ime. Companylọ ọrụ ahụ n'onwe ya egosiworị na ọ ga-abụ Huawei Mate 30, onye ngosi ya ka emere na Septemba 19 na Munich. Yabụ n'ime izu abụọ anyị ga-ahụ igwe izizi ndị a na nhazi ya. Ihe ekpughere bụ ma ha ga-eji nsụgharị ahụ mee ihe na 5G ma ọ bụ nke nkịtị nwere 4G.
Dị ndị a agaghị abụ naanị ndị jiri Kirin 990. A na-atụ anya na Honor V30 ga-eji ya, dị ka a nụchara ya awa ole na ole gara aga, ọ bụ ezie na n'oge a enweghị nkwenye sitere n'aka onye nrụpụta. Na mgbakwunye, o yikarịrị ka njedebe dị elu ha na-eweta na February 2020 nwekwara ihe nhazi a. Ma nkọwa ga-mara ọkwa na ọnwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Kirin 990: Huawei kacha ike processor bụ ukara
OnePlus malite smartphone nwere ihu igwe 90Hz dị ọnụ ala karịa nke OnePlus 7 Pro